Chautari Daily » आजको विदेशी मुद्राको भाउ , कुन देशको कति ?
आजको विदेशी मुद्राको भाउ , कुन देशको कति ?
काठमाडौं ६ साउन / आज नेपाली बजारमा अमेरिकी डलरसहितअन्य देशको मुल्य घटेको छ। आज नेपाल राष्ट्रबैँकले तोकेको बिनिमयदर अनुसार एक अमेरीकी डलरको खरिददर १०९ रुपैयाँ ७९ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रीदर ११० रुपैयाँ ३९ पैसा तोकिएको छ । त्यस्तै आज एक कतारी रियालको खरिददर ३० रुपैयाँ १६ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३० रुपैयाँ ३२ पैसा तोकिएको छ।
त्यस्तै मलेसियन रिँगिट एकको खरिददर २६ रुपैयाँ ६९ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर २६ रुपैयाँ ८४ पैसा तोकिएको छ । त्यसैगरी आज युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १३७ रुपैयाँ २५ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर १३८ रुपैयाँ तोकिएको छ । त्यस्तैगरी कुवेती दिनार एकको खरिददर ३६० रुपैयाँ ६८ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३६५ रुपैयाँ ६५ पैसा तोकिएको छ।
त्यस्तै आज बहराईन दिनार एकको खरिददर २९१ रुपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर २९२ रुपैयाँ ७४ पैसा तोकिएको छ।त्यस्तै युएई दिराम एकको खरिददर २९ रुपैयाँ ८९ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३० रुपैयाँ ५ पैसा तोकिएको छ। त्यस्तै आज साउदी रियाल एकको खरिददर २९ रुपैयाँ २८ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर २९ रुपैयाँ ४४ पैसा तोकिएको छ।
प्रकाशित मिति ६ श्रावण २०७६, सोमबार ०३:३५